Iindaba-Ngaba ufuna amatayara ekhephu eBusika?
Indlela ethembekileyo yokuzifaka engxakini kukuqhuba kwimozulu yasebusika kwisithuthi esingafanelekanga kwiimeko ezimtyibilizi.Eyokuqala kukugcinwa kwesithuthi esifanelekileyo kwaye uthathe isigqibo sokuba ufake isethi yamatayara ekhephu kwimoto yakho, kwilori okanye kwiSUV.
Amatayara ekhephu—okanye ngokuchaneke ngakumbi, “amatayara asebusika”—aneekhompawundi ezikhethekileyo zerabha kunye neendlela zokunyathela eziwavumela ukuba abambelele kwiimeko zemozulu apho amatayara aqhelekileyo angasebenzi kakuhle.Ukuba uhlala kwindawo enekhephu, umkhenkce okanye amaqondo obushushu abandayo, amatayara asebusika anokubonelela ngeengenelo zokhuseleko ezingenakubonelelwa ngamavili exesha lonke.
“Amatayara asebusika” ligama lemizi-mveliso elidla ngokusetyenziswa endaweni yelithi “amatayara ekhephu” ngenxa yokuba itayara elitsha liyiphucula indlela ebaleka ngayo inqwelo-mafutha, ikwazi ukunyathela iziqhoboshi neyokuyilawula kwanakwimozulu ebandayo neyomileyo.
Umsebenzi wamavili ebusika kukwandisa uluhlu lweemeko apho amathayi agcina ukubamba kunye nokubonelela nge-traction xa amathayi aqhelekileyo ahamba.Zinokuba yintengo ebiza kakhulu, ngoko abathengi baya kufuna ukubona ukuba kufuneka bazithenge kwaye bazibeke nini emotweni yabo.
URobert Saul, umalathisi wecebo lemveliso yabathengi kuMntla Merika eBridgestone, wathi: “Ukuba uhlala kwimozulu apho amaqondo obushushu aqhubeka engaphantsi kwama-40 ngokukaCelsius okanye ngaphantsi kangangexesha elide, ndicinga ukuba ufanele ucinge ngokusebenzisa amatayara asebusika.”
USawule wongezelela ngelithi ukuba uhlala usiya ezintabeni ukuze ube nenxaxheba kwimidlalo yasebusika, izinto ozonwabisa ngazo zisenokuphembelela isigqibo sakho.
Uvavanyo oluqhutywe yiKhanada yezoThutho kunye noMbutho weRubber waseCanada ubonise ukuba amathayi exesha lonke aphambuke kumzila wokuvavanya ngesivinini se-40 ukuya kwi-50 km / h;oku akuyi kwenzeka kwiimoto ezixhotyiswe ngamatayara asebusika.
Uphononongo olwenziwe ngurhulumente waseQuebec lugqibe kwelokuba ukufakela amatayara asebusika afanelekileyo kwisithuthi sakho kunokunyusa ukusebenza kwebraking ukuya kuthi ga kwi-25% kunye nokuphepha ukuntlitheka malunga ne-38% xa kuthelekiswa namatayara erediyali exesha lonke.
Abavelisi beemoto ezitsha bancomela ukuba bafake amasondo ebusika ngokufanelekileyo, ukufezekisa ukhuseleko olungcono kunye nokusebenza ngexesha lasebusika.